ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း - ယရှေုသညျမုန်တိုင်း (35-40 မာကု 4) Calms
ညနေပိုင်းတွင်လာသောအခါ 35 ထိုနေ့, သူတို့၌အမိန့်တော်ကား, ကျွန်တော်တို့ကိုအခြားဘက်ဆီသို့ကူးသွားပါစို့။ 36 ထိုသူတို့ကလူအစုအဝေးလွှတ်လိုက်ပြီးမှ, သူတို့ကသူသင်္ဘော၌ရှိ၏ပင်အဖြစ်သူ့ကိုခေါ်သွားတယ်။ နှင့်အခြားနည်းနည်းသင်္ဘောများကသူ့ကိုလူတို့နှင့်လည်းရှိခဲ့သည်။ 37 ထိုအရပ်၌လေတိုက်ရာကိုပြင်းစွာမိုဃ်းသက်မုန်တိုင်းထကယခုပွညျ့စုံသောကြောင့်လှိုင်းတံပိုး, သင်္ဘောထဲသို့ရိုက်တယ်။ အကြှနျုပျတို့သညျပျက်စီးခြင်းသို့ရောက်မနှင့်သူတို့သူ့ကိုနိုး, သူ့ကိုအားဆင့်ဆိုရမည်မှာ, Master, carest: 38 ထိုမင်းသည်တစ်ဦးခေါင်းအုံးပေါ်မှာအိပ်ပျော်သင်္ဘော၏ကမ်းနားပိုငျးတှငျခဲ့သလဲ
39 ထိုသူသည်လည်းထ, လေသည်ဆုံးမတော်မူသဖြင့်, ပင်လယ်တိုင်အောင်, ငြိမ်းချမ်းရေး, ဆဲဖြစ်ဟုဆိုသည်။ ထိုအခါလေတိုက်စဲခြင်း, အလှနျသာယာရှိ၏။ 40 သင်တို့သည်အဘယ်ကြောင့်ဤမျှလောက်ကြောက်တတ်ကြဟုမိန့်တော်မူ၏? သင်တို့သည်အဘယ်သူမျှမယုံကွညျကွောငျးကိုမည်သို့ဖြစ်သနည်း 41 ထိုသူတို့ကအလွန်အားကြောက်ရွံ့ရိုသေလျက်, တယောက်ကိုတယောက်ပြော, ကားအဘယ်သို့ပင်လေတိုက်နှင့်ပင်လယ်သည်သူ၏စကားကိုနားထောင်ကြောင်း, ဒီပါသလဲ
နှိုငျးယှဉျ: မဿဲ 13: 34,35, မဿဲ 8: 23-27; လုကာ 8: 22-25
ယေရှုနဲ့သူ့နောက်လိုက်များကကူးခံရမှာ "ပင်လယ်" ဟုအဆိုပါဖြစ်ပါတယ် ဂါလိလဲပင်လယ် , ဒါသူတို့မှပေါ်ရွေ့လျားနေသောဧရိယာပစ္စုပ္ပန်ရက်ကြာယော်ဒန်မြစ်ပါလိမ့်မယ်။ ဤသည်ယုဒလူတို့ကိုကျော်လွန်ပြီးနှင့်လူမျိုးခြားကမ္ဘာကယေရှုရဲ့မက်ဆေ့ခ်ျကိုနှင့်ရပ်ရွာများ၏နောက်ဆုံးတိုးချဲ့ဖို့ညွှန်ပြ, တပါးအမျိုးသားတို့သည်အားဖြင့်ထိန်းချုပ်ထားသောနယ်မြေထဲသို့သူ့ကိုယူလိမ့်မယ်။
ဂါလိလဲအိုင်ကိုဖြတ်ပြီးခရီးစဉ်အတွင်းကြီးမားတဲ့မုန်တိုင်းထကြွလာ - လှေဤမျှလောက်ရေကဝင်ကြ၏ထားပါတယ်ပြီးနောက်နစ်မြုပ်ခြိမ်းခြောက်နိုင်အောင်ကြီးမား။ ယရှေုသညျဤအမည်မသိဖြစ်ပါသည်, သို့သော်ကျမ်းပိုဒ်အပေါ်ရိုးရာမှတ်ချက်အသူတမန်တော်၏ယုံကြည်ခြင်းကိုစမ်းသပ်နိုင်ရန်အတွက်တမင်တကာအိပ်ပျော်သည်ဟုဆိုသော်လည်းအိပ်ပျော်နေစီမံခန့်ခွဲ။
သောအမှုဖြစ်တယ်ဆိုရင်မိမိတို့အားလုံးရေနစ်လျှင်သူဂရုစိုက်ရှိမရှိရှာသညျယရှေုနှိုးနိုင်အောင်ကြောက်သောကြောင့်, ထို့နောက်သူတို့က, မအောင်မြင်ခဲ့ပေ။
ယောန၏ဇာတ်လမ်းတစ်ပုဒ်သူ့ကိုသင်္ဘောများတွင်ဆင်းအိပ်ပျော်နေသောကြောင့်ဤတွင်သညျယရှေုအိပ်ပျော်နေသောဖြစ်ပါတယ်။ ထိုကဲ့သို့သောရှင်းပြချက်လက်ခံခြင်းသျော, ဒီဇာတ်လမ်းကိုစာရေးဆရာနှင့်မတိကျသောသမိုင်းဇာတ်ကြောင်းကစာပေဖန်တီးမှုသောစိတ်ကူးလက်ခံလိုအပ်သည်။
ယရှေုသညျမုန်တိုင်းအဆုံးသတ်နှင့်ငြိမ်သက်ဖို့ပင်လယ် restore ဆက်လက် - ဒါပေမယ့်ဘာကြောင့်လဲ မုန်တိုင်းအေးဆေးသူယုံကွညျခွငျးကိုမများအတွက်အခြားသူများကိုဆုံးမဘာလို့လဲဆိုတော့လုံးဝလိုအပ်သောပါပြီမှပေါ်လာပါဘူး - ယူဆရသူတို့ကသူတစ်ဝှမ်းစဉ်ဘာမျှသူတို့ကိုဖြစ်ပျက်မယ်လို့ယုံကြည်စိတ်ချရပြီသငျ့သညျ။ ဒါကြောင့်အပြင်ပန်းကသူသူတို့ပဲဒဏ်ငွေအနှံ့ကစေပြီမယ်လို့မုန်တိုင်းရပ်တန့်မပေးခဲ့ရသည်။
ဒီတမန်တော်များအထင်ကြီးနိုင်ရန်အတွက်အဝတ်အချည်းစည်းပါဝါတစ် display ကိုဖန်တီးရန်ရိုးရှင်းစွာထို့နောက်သူ့ရည်ရွယ်ချက်ကိုခဲ့သလား သို့ဆိုလျှင်သူသူတို့ကမုန်တိုင်းဟာလွန်ခဲ့တဲ့အချိန်လေးကဲ့သို့ယခုသူတို့အထံတော်၌နည်းတူမကြောက်ဖို့ပေါ်လာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အရာ၌နန်းထိုင်။ ဒါဟာသူတို့သူသည်အဘယ်သူသည်နားမလညျဘူးသျောထူးဆန်းပါတယ်။ သူတို့ကသူတစ်ခုခုလုပ်ပေးနိုင်ပါလိမ့်မယ်မထင်ခဲ့ဘူးဆိုပါကအဘယ်ကြောင့်သူတို့ကပင်သူ့ကိုနိုးခဲ့တာလဲ
ဒါဟာအတော်လေးအစောပိုင်းသည်သူ၏ဝန်ကြီးဌာနကဆဲဖြစ်သော်လည်းသူကသူတို့ကိုရန်သူ၏ပုံပမာ၏လျှို့ဝှက်ချက်အဓိပ္ပါယ်များအပေါငျးတို့သရှင်းပြခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့သူသည်အဘယ်သူသည်မဖုံးခဲ့ကြောင်းနှင့်သူဘာလုပ်နေတယ်ဆိုတာကို? ဒါမှမဟုတ်သူတို့ခဲ့လျှင်, သူတို့သည်ရိုးရှင်းစွာသူ့ကိုယုံကြည်ကြသည်မဟုတ်လော ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်, ဒီ dolts အဖြစ်ပုံဖော်ခံတမန်တော်နောက်ဥပမာဖြစ်ပေါ်လာသည်။
ဤကျမ်းပိုဒ်အပေါ်ရိုးရာမှတ်ချက်အမှတစ်ဖန်ပြန်လာ, များစွာသောဒီဇာတ်လမ်းကိုကျွန်ုပ်တို့၏အသက်တာအတွက်ကျွန်တော်တို့ဝန်းကျင်ပရမ်းပတာနှင့်အကြမ်းဖက်မှုကြောက်မက်ဘွယ်သောဖြစ်ဖို့မကျွန်တော်တို့ကိုသင်ပေးဖို့ထင်နေသည်ဟုဆိုသည်။ ငါတို့သည်ယုံကြည်ခြင်းအားရှိပါကပထမဦးစွာ, ထို့နောက်မခိုကျွန်တော်တို့ကိုလာရန်ဖြစ်ပါသည်။ ဒုတိယအချက်အသငျသညျယရှေုကိုအဖြစ်ပြုမူလျှင်ရိုးရှင်းစွာပြီးနောက်သင်ကအနည်းဆုံးငြိမ်းချမ်းရေးအချို့အတွင်းသဘောအရအောင်မြင်ရန်မည်, အရှင်ဖြစ်ပေါ်လျက်ရှိသည်ဘယ်သို့သောအားဖြင့်လျော့နည်းပူပဖြစ် "နေဆဲဖြစ်" ဖို့ပရမ်းပတာမှာထား၏။
ဟုန်းဟုန်းတောက်လောင်သမုဒ်, နတ်ဆိုးတို့၏အလုံးအရင်းနှင့်သေခြင်းသူ့ဟာသူ: တစ်ဟုန်းဟုန်းတောက်လောင်မုန်တိုင်း၏ငြိမ်သက်ယေရှုရဲ့ပါဝါကိုကြောက်မက်ဘွယ်ပင်ဒဏ္ဍာရီလာတပ်ဖွဲ့တွေကဆန့်ကျင်ထင်ရှားသည်အဘယ်မှာရှိသည်အခြားပုံပြင်များနှင့်အတူကိုက်ညီ။ ပင်လယ်ကိုသူ့ဟာသူ Confining တွင်ဖော်ပြပါရှိသည်ဖြစ်ပါတယ် ကမ်ဘာဦးက ဘုရားသခငျ့အာဏာနှင့်အခွင့်ထူးတစ်ခုရှုထောင့်အဖြစ်။ ဒါဟာယေရှု၏အောက်ပါပုံပြင်များ, အရှင်ဝေးကိုတှေ့မွငျခဲ့သဘယ်အရာကိုထက်ပိုမိုအစွမ်းထက်တပ်ဖွဲ့များတိုက်ဖျက်ရေးနောက်ထပ်သာဓကပါဝင်ကြောင်းတိုက်ဆိုင်မှုမဟုတ်ပါဘူး။
ယေရှုရဲ့အထည်ချုပ်ထိမိဘယ်သူအမျိုးသမီး (မာကု 5: 21-34)
တိုယိုတာ A-BAT Hybrid ကို Truck ကား
လူမှုဗေဒမှ max Weber ရဲ့သုံးအကြီးမားဆုံးအလှူငှမြေား
ပထမကမ္ဘာစစ်: Air ကိုမာရှယ်ဝီလျံ "Billy" ဆရာတော်
US မှာ Mass အညွန့်ပေါ်တွင်အချက်အလက် Get
လေ့လာမှုများနှင့်ဆွေးနွေးချက်များအတွက်မေးခွန်းများက 'ယင်ကောင်၏သခင်' '
မိုဘီလ် O'Reilly Quotes
သင့်ရဲ့ဖျော်ဖြေမြှင့်တင် - သတင်းများ၌၎င်း, လူမှုမီဒီယာအပေါ်
အားလုံး '' Bold နှင့်လှပသော '' စတား Karla Mosley အကြောင်း 13 အချက်အလက်
အရောင်ချွတ်အရောင်တင်အချက်အလက်နဲ့ (Common မေးခွန်းများမှအဖြေများ)
4 ကလေးများခေတ်2များအတွက်အကောင်းဆုံးဂီတအဆိုတော်များ
"ငါသည် My Life Bet" နဂါး '' ကိုမြင်ယောင်ကြည့်၏ပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်းနှင့်နောက်ခံသမိုင်း